Sonni Ali Ber - Muvambi weRwiyohai Humambo - AFRIKHEPRI
Sonni Ali Ber - Nheyo yeHurumende yeHunghai
kugashira MAMBO EEFRICA
Sonni Ali Ber - Muvambi weMambo weHunghai
Liye Songhai angadai akagadzirwa nekureurura kubva kuMaliya Kingdom muzana ramakore makumi mashanu nematatu AD pasi peSni Suleiman Mar. Pakutanga kwehumambo husina basa uhwo chigaro chake chaive kuGao. King Sonni Ali Ber ndiye mambo wechigumi nemashanu wechiM Sonni wedzinza, uyo akatanga kutonga muna 56 (15).
Sonni Ali achiona Umambo hweMali huchiderera, anosarudza kuwedzera nzvimbo yayo nekushomeka kwenyika iyo Rabelais akataura nezvaMansa (mambo) kuti ndomumwe wamambo akakura pasi rose. Sonni Ali anozoita muhondo dzekukunda uye anodzosera kurwiswa kweMogho Naba (mambo) Nasséré weMossi kumaodzanyemba neyeMbwaons pazvikomo zveBadiangara. Timbuktu anomudaidza kuti abatsirwe kurwiswa nemaTuaregs uye mushure mekukunda, anokunda guta iri muMali muna 5705. Anobva aunganidza boka rezvikepe mazana mana paNiger kuzokomba Djenné. Guta rakarwiswa naSonni Ali kwemakore uye vakasarudza kuenda muna 400 nzara painogarapo. Muchinda wechidiki weJennenné anouya kuzosangana naSonni Ali uye uyu akabatwa akamutambira neushamwari uye anoshamiswa kuti ndiye murume wechidiki akamusimudzira nguva yese iyi. Muchinda uyu anomuzivisa kuti baba vake vafa uye Sonni Ali anosarudza kutora amai veuyo kuti ave mukadzi wake. Muchinda uyu zvinoenderana nenyaya, aigara mune yakasvibirira yakasvibirira. Sonni Ali Ber nokudaro anova masheya emaguta matatu makuru paNiger (Gao, Tombouctou uye Djenné) uye anotonga kutengeserana. Yakawanda yeMali inowira pasi pechiremera chake. Sonni Ali aive mushandi wetsika yemweya yeAfrica uye haana kumbonyatsobvuma chiIslam. Izvo zvakamuwanira kuvenga vafambi vechiMuslim avo vaimuti mudzvanyiriri, villain, libertine uye kudeuka kweropa.
Masekete evaMuslim akaramba achirangana nezvake uye akatongerwa chitendero mhosva yekumukira Mwari. Emperor aisimbomira kusvika manheru kana zuva raitevera minamato yake yemazuva mashanu uye paakafunga kuzviita, akagutsikana kugara pasi, kuita zviitiko zvinoverengeka nekupa mazita akasiyana minamato; Mushure maizvozvo, achitaura neminyengetero iyi pamwe chete nevanhu, akati kwavari "izvozvi govanai izvi pakati penyu, sezvo muchizivana zvakanaka". Emperor vakashaya muna 5, vamwe vanofunga kuti angadai akaisirwa muchetura neumwe wevatezvara vake, Mohammed Touré. Mohammed Touré achauya mukunetsana nemugari wenhaka Sonni Baru waachauraya uye abudirire Sonni Ali kuchigaro chaSonghai, achipedza Sonni dzinza nekumisikidza dzinobvunza zita raDiaia.
Pre-colonial black Africa, Cheikh Anta Diop, mapeji 69, 71
Pre-coloner vatema Africa: Kuenzanisa kudzidza ezvematongerwo enyika uye zvemagariro masisitimu eEuropean neBlack Africa, kubva kuAntiquity kusvika pakuumbwa kwenyika dzazvino
1 nyowani kubva ku € 12,20
1 yakashandiswa kubva € 89,00
Tenga 12,20 €
kubvira waChikunguru 11, 2020 9:18 am
Edition 2th edition
Wakanga uchiziva here kubudirira kweNok?
Hurukuro yaPatrice Lumumba kumhemberero yerusununguko munaJune 30, 1960